An-kitsim-po: fiasa vaovao | NewsMada
Maro ny zavatra tsy nandeha, araka ny nantenain’ny vahoaka, teto amin’ny firenena hatramin’ny nahazoana ny fahaleovantena, 59 taona, izay. Maro koa ireo mpanao politika sy mpitondra nifandimby, nanome toky hanao izatsy na izaroa, saingy tsy nahatanteraka ny ankamaroany.
Midika izany fa hisy ny fomba fiasa vaovao, ahazoana vokatra sy asa mivaingana, satria ny tombontsoa handrosoan’ny firenena no tanjon’ny filoham-pirenena vaovao. Hanova ny fomba fiasa, ny fomba fanao, koa aoka tsy hanantena ny hanohy ny lalan-dririnina, namotika ny firenena ireo mpila dokadoka sy voninahitra na tombontsoa manokana.
Raha ny hita sy itovizan’ny isam-paritra, ny fihariana sy ny hisian’ny fampandrosoana amin’ny lafiny fotodrafitrasa ara-toekarena sy ara-tsosialy no tena andrandrain’ny Malagasy. Ao anatin’izany ny hanatsarana ny fihariana sy ny asa fivelomana, ny fahasalamana ary ny fanabeazana. Tsy tanteraka ireo raha tsy misy ny fandriampahalemana maharitra an-tanàn-dehibe sy ambanivohitra mba ahafaha-mamokatra sy mihary.
Mila miova ny fomba fitantanana ny firenena, indrindra, efa latsaka anaty fahantrana ny vahoaka. Sahaza ny Malagasy tsirairay ny hivoatra amin’ny fihariany, hanana fari-piainana tsara kokoa.